Ụbọchị My Pet » Nwere ike Ọma Women n'ezie ọ All?
…Ma ọ bụ ndị taa "overachievers" emebi ha mmekọrịta?
"Ị na-abịa a ogologo ụzọ, nwa,"Na-ekwu, a na-ewu ewu azụmahịa na-akụ aka evolushọn nke taa nwaanyị. Ma n'ezie anyị erutela!
Ụmụ nwanyị oji biri dika si a ụbọchị na afọ mgbe anyị apụghị ọbụna ikpu votes, ndọrọ ndọrọ ọchịchị powerhouses na-guru na.
Ọbụna ụlọọrụ arena, ọtụtụ n'ime anyị arịgowo ụlọọrụ ladders na-edu ndú ọrụ, ijikwa oke ngalaba Amawaputala na subordinates a na-ndị ikom.
Tinye ka a bụ eziokwu ahụ anyị na-efe anyị onwe anyị ụlọ obibi, irite anyị onwe anyị ego, na anyị nwere echiche. Ndien ke okwu nke na-abụ abụ otu, Akara Aka si Child, "M na-adabere m, ọ bụrụ na m chọrọ ya. "
Bravo abụọ! Kpọọ isi ala.
Ma, ebe a bụ ahia anya…
Taa ọma nwaanyị nwere ike na-emeri na azụmahịa mgbe adịkwa ịhụnanya na.
Na ebe a bụ ihe mere.
Dị nnọọ ọtụtụ n'ime anyị na-aghọta na ọtụtụ n'ime àgwà na-ekwe ka anyị na-achịkwa ahụ boardroom, nwere ike ime ka mebie na ime. Nnọọ?!
Na agha nke sexes, anyị na-na-emeri n'agha ma adịkwa agha?
Ma ọ bụ, n'ime okwu nke Dr. Phil, "Olee otú bụ na workin’ maka '?"
Ebe a na-anọ nkịtị ndapụta na-egosi otú anyị mgbe ụfọdụ emasculate anyị ndị ikom na-enweghị ifiọkde ya.
Ikekwe, ị na na na na na ikpe mara nke a ole na ole. Gụọ na na chọpụta.
IHE "Ọ bụ m ụzọ ma ọ bụ Ụzọ Awara Awara" echiche— Chọpụta, n'ọnọdụ ịbụisi na-arụ ọrụ n'ụwa ka anyị na-agwa anyị na ọchịchọ ndị anyị iku na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ha. Ma, onye mmekọrịta dị iche iche. Ha na-kwesịrị ịbụ mmekọrịta ebe abụọ ọzọ’ mkpa na mmetụta na-ebe, bụghị ọrụ nke ịzụ ụmụ ma ọ bụ nnapụta.
Onwunwe ibu—Chineke na-agọzi nwa ahụ na-nwetara ya. Ma ụfọdụ n'ime ndị anyị g'eme ka anyị na di na nwunye maara na ihe onwunwe anyị na ihe onwunwe bụ byproducts anyị ịga nke ọma na iso nanị anyị, karịsịa na okpomọkụ nke esemokwu. "Ụlọ m, ụgbọala m, m ego. "My okwu!
"ABỤ M nwanyi-anụ olu m Mbigbọ "ọrịa—Site na-enwe ike ime ka anyị onwe anyị na ego na-enye anyị onwe anyị nke ọma ịbụ, ka ọmụmụ na doro nhọrọ na ike X mmadụ nke ụbọchị akụkụ nke ndụ, ụfọdụ n'ime anyị na-enye ndị ozi na ndị ikom na-dispensable anyị na okwu na omume.
Ewere NNUKWU Akwụrụ Otu n'okwu ndị dị nta—-Ebu agha na okwu na-enye ụfọdụ ndị inyom a mmetụta nke ike na mkpa, mgbe na-ahapụ ndị ikom enupụ isi ma na-eguzogide ọgwụ mgbanwe.
Strong bụghị mgbe niile na-ezighị ezi.
Ma itule bụ mgbe mma.
Nwere ike inyom nwere ya niile?
Chọpụta, ma o si Na Na’ akwụ tab— nke na-akpọ maka obere Nye ma na-na otu negotiating nkà savvy nwanyị jiri si 9 ka 5. Ka emechara, dị ka Billy Dee William agwa Diana Ross na fim mahogany, "Ịga nke Ọma na-enweghị onye na ịkọrọ ya n'aka nothin '!"